जुना लिम्बुको जन्मदानै दुबै खुट्टा गुमेको रहेछ क`ठै विचरा ! संसारलाई रुवाउने कथा (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar Patrika Np
जुना लिम्बुको जन्मदानै दुबै खुट्टा गुमेको रहेछ क`ठै विचरा ! संसारलाई रुवाउने कथा (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ३१, २०७८ समय: २२:३४:३५
जुना लिम्बूको जन्मने बितिकै दुइओटा खु`ट्टा थिएनन । उनी अहिले २६ वर्षकी भएकी छिन । उनका श्रीमान ३३ वर्षका छन । तीन जना दिदिहरुको लगातार मृ`त्युु पछि कान्छी छोरिको रुपमा उनको जन्म भएको थियो । ग`रिबिको रेखामुनी जन्मिएकी जुनाको जन्मदानै दुबै खु`ट्टा गु“मेको रहेछ क`ठै विचरा !
उनी अशक्त भएपनी उनको श्रीमान हट्टा कट्टा र खाईलाग्दा छन । बनिबुतो र मेलापात गरेर आफ्नो जिविको पार्जन गर्दै आईरहेको छ यो जोडि । कयौ रातहरु आफ्नी सानी छोरी सगै उनिहरु भोक भोकै बसे ।कहिलेकाही त जुनाले यो सब दु`खको भागेदार आफुलाई सम्झेर भक्का`निन ।
जुनाको बिहे १४ वर्षको कलिलो उमेरमा भएको रहेछ । लिम्बू परिवारमा जन्मेर होला सानै उमेरमा बिहे गरे भन्छिन । आफ्नै सोल्टि सग फोनमा कहिलेकाही बोल्दा बोल्दै माया बसेको पत्तै पाइन भन्छिन । प्रेम बिबाह गरेका यी जोडिको माया र साथ एकदमै दरिलो र मजबुतिलो देखिन्थ्यो ।
अ`पांग बुहारी ल्यायो भनेर सन्तोषका बुबा आमाले स्विकार नगरेपछी यो जोडि अ`न्यौलमा पर्यो । अहिले अ_भाब र द`बाबका बीच जिन्दगी हासेरै बिताईरहेका छन । दुई सन्तान र बुढाबुढी गरि चार जनाको परिवार छ उनिहरुको । पाचथरको यो महान जोडिलाई हाम्रो सम्मान छ ।जुनाले आफ्नो दुईहातको सहराले जीवन धानिरहेकी छिन ।
लज्जालु स्वभावका यी जोडि सुरुका दिन सम्झिएर रातोपिरो भए । ५ वर्षसम्म फोनमा कुरा गरेको बताउछन । मन मिल्यो,विचार मिल्यो बिहे गर्यौ भन्छन । बिबाह भएको ५ वर्ष भएछ । मेलापात हिडदा,बजार डुल्दा एक अर्काको फोन नम्बर ल्याई कुरा बड्दै गएको बताउछन । एक्दिन जुना पाहुना लाग्न आएपछि उनिहरुले विबाह गरेछन ।
जुनालाई आफ्न्त र छिमेकिले खु`ट्टा न´भएकी भनेर बे`ईज्वत गर्दा र कुरो काट्दा चित्त दुख्दो रछ ।मेरो बा`ध्यता नबुझिदिनेहरु प्रती अचम्म लाग्छ भन्छिन । मेरो जन्मदा नै यस्तो भयो भन्छिन । श्रीमानले पनि कहिलेकाही दु`ख दिदा चै सबथोक छोडेर टाढा जान मन लाग्दो रहेछ उनलाई । तर छोराछोरीको मायाले सधै बन्धमा बा´धेर राख्छ ।
उनिहरुको आ`र्थिक अवस्था न्यून छ तर पनि यो जोडि आफ्नो मेहेनतमा रमाएको छ । सन्तोष घरको कान्छो छोरो हुन ।उनी श्रीमती ल्याएपछि बुबा आमा सग छुटिएर घर बनाएर श्रीमतिसग बस्दै आएका छन । श्रीमती र छोरिलाई खुशी बनाउन चाहन्छन तर अवस्था दयनीय भएकाले सोचे जस्तो गर्न सकेका छैन तर पनि उनले हिम्मत हा`रेका छैन ।
सन्सारकै अनौठो यो जोडि छोरिहरुलाई धेरै पढाएर ठूलो मान्छे बनाउन चाहन्छन । आफुले जस्तै कुटो कोदालो र बारिका पाखाहरु नकुदोस भन्ने चाहन्छ ।छोरिहरुलाइ पढाएर देशको सेवा गर्ने होस भन्ने चाहन्छ । उनिहरुको सपनाहरू पूरा हुन । यो महान जोडिलाई हाम्रो पनि शुभकामना छ ।दु`ख नपाओस यो जोडिले ।भिडियो: